Maitiro ekumisikidza Mac kana yekunze hard drive pane macOS | Ndinobva mac
Maitiro ekuomesa dhiraidhi yakaoma paMac
Jose Alfocea | | apuro, Mac Os X, Tutorials
Panyaya dzakadai ndinogara ndichiyeuka nguva yekutanga pandakabata Mac: Ini ndaifanira kutora yangu Symbian nhare mbozha, batanidza kuMessenger uye ndobvunza maitiro ekuwana MSN pakombuta yangu nyowani. Dambudziko rekushandura mashandiro ehurongwa nderekuti ivo vakachinja zvese kwatiri, saka kana tiri vatsva switcher waita switch yako kubva kuWindows kuenda kuOS X, pamwe hatizive maitiro ekuomesa ekunze hard drive paMac.
Sezvinobvumwa, maitiro acho ari nyore, asi haana kufanana neWindows, kwaunofanirwa kungobaya-kurudyi pane dhiraivha uye sarudza "Fomati". Kuti uwane zvakafanana muMac OS X isu tichafanirwa kuzviita tichishandisa chishandiso Disk zvinoshandiswa iyo inowanikwa muUtility folda, iyo iri mukati meApplication folda. Tevere tinokuratidza kuti sei fomati yekunze hard drive paMac (izvo zvisina kumbosiyana nekumisikidza Pendrive).
1 Maitiro ekugadzirisa Zvekunze Zvakaomarara Dhiraivha pane Mac
2 Mhando dzemhando
2.1 Mac OS X Uyezve
3 Ndinogona fomati rakaoma dhiraivha muNTFS paMac?
4 Ini ndinogona kudzima diski paMac ndisina kuimisa?
5 Maitiro ekuomesa Mac
6 Makomborero ekugadzirisa Mac
7 Maitiro ekuomesa Mac nhanho nhanho
Maitiro ekugadzirisa Zvekunze Zvakaomarara Dhiraivha pane Mac
Isu tinovhura iyo Disk Utility iyo, sezvatareva, iri munzira yeApplications / Utility. Tinogona zvakare kuivhura kubva kuLaunchpad uye kupinda mune Imwe folda kana kuvhura Spotlight uye kutanga kunyora zita rayo (nzira yekupedzisira ndiyo yandinofarira).
MuDisk Utility, tinosarudza iyo hard drive yatinoda kuifomati, tichichenjerera kuti tisasarudze chero imwe hard drive iyo yatingave takabatana neMac panguva iyoyo.
Ipapo tinobaya pane "Delete".
Isu tinosarudza mhando yemafomati atinoda.
Pakupedzisira, tinodzvanya pa «Delete» zvakare.
Maitiro acho ari nyore, handiti? Asi, zvinoenderana nezvatinoda, isu ticha fomati dhisiki neimwe nzira kana imwe.
Matipi ekuwedzera yako disk nzvimbo paMac
Iyi ndiyo Apple fomati, kuzviisa nenzira inokurumidza uye yakapusa. Kana isu tikamomesa dhiraivhu rakaomarara ratiri kuzoshandisa chete paMac makomputa, zvingangoita kuti iyi ndiyo fomati yakanaka yatinogona kushandisa, nekuti zvese zvinokurumidza uye zvinoshanda zvirinani. Asi dambudziko nderekuti nhasi kune makomputa akawanda uye hatigone kuziva kuti tichaishandisa riini mune imwe neimwe sisitimu inoshanda, saka zvinofanirwa kuve pachena kuti kana tikazvimisikidza muMac OS X Plus hatizokwanise kuverenga kana kunyora pairi pane imwe komputa. Iyi fomati haisi yekugovana, handei.
Tinogona kutaura kuti FAT ndiyo fomati yepasirese. MuWindows tichazviona seFAT32 uye kana tikazvimisikidza mune iyi fomati tinogona kuverenga nekunyora ruzivo pane chero sisitimu inoshanda, inosanganisira Mac, Windows, Linux uye kunyange nharembozha kana zvinyaradza.
Dambudziko nemhando iyi nderekuti inongotsigira mafaira kusvika ku4GB, saka hatina kukwanisa kutakura DVD-saizi bhaisikopo (4,7GB) pane USB kana FAT-yakamisikidzwa hard drive. Isu tinogara tine mhinduro yekuzvipatsanura, asi izvi zvinogona kunetsa izvo zvisina kukosha.
Iyo inonakidza fomati yekomputa ndeye ExFAT. Ndizvo inoverengwa kubva kuMac, Windows uye Linux, asi ivo havazokwanise kuverenga kana kunyora pane mamwe marudzi emidziyo, senge nharembozha, zvinyaradzo, materevhizheni, nezvimwe. Kana iwe uchifanira kutakura data pakati pemakomputa, iyi fomati yakakosha. Kana yako unit ichifanirwa kushandiswa mune mamwe marudzi emidziyo, zvirinani kushandisa FAT.
Ndinogona fomati rakaoma dhiraivha muNTFS paMac?
Hongu, asi nema nuances. Apple makomputa anogona kuzviita zvese. Muchokwadi, tinogona kuisa Windows neBootcamp uye kushandisa mapurogiramu ayo ese. Asi sezvo zvatiri kuda kuumbiridza dhisiki muNTFS muOS X, izvi hazvaizoita sarudzo. NTFS ndiyo yemuno Windows fomati, saka hatizokwanisi kushanda pairi neMac chaimo kunze kwebhokisi.
Kuomesa hard drive muNTFS uchishandisa Mac isu tichafanirwa kuisa chechitatu bato software iyo, sezvaungave wafungidzira, inobhadharwa. Maviri ezvirongwa zvakanakisa ndeye Paragon NTFS yeMac (download) uye Tuxera NTFS yeMac (download). Kana imwe chete yezvirongwa zviviri yatorwa uye yaiswa, tichakwanisa kuverenga nekunyora pane chero diski ine fomati yeNFTS, pamwe nekuimisa kubva kuMac pachayo.
Ini ndinogona kudzima diski paMac ndisina kuimisa?
Chokwadi, izvi zvinogona kushupika kana tisingazive kuzviita. Mune Unix-based anoshanda masisitimu iwe haugone kungodzima data kubva kune rekunze disk, kwete. Zvekuchengetedza, kana tikabvisa data kubva kunze dhiraivha paMac neLinux, iyi data ichaenda kune chakavanzika dura rakanzi ".Trash". Kutanga, kana isu tisingazvione, isu tichangoziva chete kuti tave kupererwa nediski nzvimbo. Isu tinogadzirisa sei dambudziko iri risingafadzi? Zvakanaka, zviri nyore kwazvo uye zvirinani kudzidza kudzima data kubva kune ekunze madhiraivha vasati vaenda kumarara.
Kugona kudzima data kubva kune rekunze dhisiki kana USB paMac isu tichafanirwa kuzviita nematanho maviri: mune yekutanga isu tinodzvanya iyo Kiyi yekudzora uye, tisingaregedze, tichadhonza iyo faira kana mafaera atinoda remove kudesktop yekomputa yedu. Nekudzvanya Kudzora zvatiri kuita ndizvo kuti "vanofamba"Naizvozvo, tichiri kuteedzera kudesktop yedu, inozoibvisawo zvachose kubva kune yedu yekunze dhiraivha. Kechipiri kekuti, zvine musoro, kudzima iyo faira nekuiendesa kune marara.
Kana iwe watobvisa iyo data, iwe hauone chero chinhu mune iyo Tsvaga uye dhisiki inoramba ichitora nzvimbo, iwe uchafanirwa kuita zvakafanana chinhu icho chatatsanangura mudanho rekutanga, asi kutanga isu tichafanirwa kutora yapfuura nhanho: vhura a chiteshi (iyo yatinogona kuwana kuburikidza nenzira dzakafanana seDisk Utility) uye tinyore unotevera kuraira:
zvisizvo nyora com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE
Kwatinofanira kuisa "CHOKWADI" kuti tione mafaira akavanzwa kana "FALSE" kuitira kuti mafaira akavanzwa achiri kuvanzwa. Nemafaira akavanzwa zvakanaka pamberi pekuti isu tinogona ikozvino kutsvaga iyo folda «.Trash» (iyo poindi pamberi zvinoreva kuti yakavanzwa), dhonza data kudesktop uyezve kumarara.
Kubva ikozvino zvichienda mberi ndave nechokwadi kuti hauchisina chero dambudziko kana uchifometa dhiraivhu rakaomarara paMac.
Maitiro ekuomesa Mac
Iyo Mac iri padyo yakakwana muchina, asi chete "padhuze." Zvisinei nekuita kwayo kukuru, simba uye kudekara kwekushandisa kwechero ipi yemhando dzayo pamusoro pePC, chokwadi ndechekuti "Junk" inounganidza zvakare pamakomputa edu eMac kubva kune maapplication atakatoburitsa, vashanduri veapp isu vatisingazive vachiri kutenderera, kugadziridza, makuki, cache, nezvimwe. Naizvozvo, nguva nenguva, zvinouya zvinobatsira fomata iyo Mac uye uisiye iri nyowani kubva kufekitori. Uye zvakare, kana uchida, unogona kurasa yako Time Machine backup, kunyange ini ndisingazvikurudzire nekuti izvi zvingarasirewo chikamu cheiyo "marara", kana iwo maforodha awakambogadzira kopi pane rakaomarara dhiraivha kunze .
Makomborero ekugadzirisa Mac
Paunenge iwe wamomesa Mac yako, iwe uchaona ipapo mabhenefiti maviri:
Yako Mac's HDD kana SSD kuchengetedza ikozvino ine zvakawanda yakawanda yemahara nzvimbo, kunyangwe mushure mekudzoreredza maapplication ako uye kunyangwe warasa backup yapfuura.
Mac yako izvozvi inoshanda zvakanyanya mushe kupfuura pakutanga, inokurumidza uye inoshanda zvakanyanya.
Maitiro ekuomesa Mac nhanho nhanho
Kana komputa yako yeapuro isisashande sezvainofanirwa, saka nguva yasvika yekumomesa Mac yako, chimwe chinhu chiri nyore sekutevera anotevera matanho kune tsamba:
Gadzira kopi yekuchengetedza yeMac yako neTime Machine kana kuteedzera kune yekunze hard drive zvese zvaunoda kuendesa gare gare kune yako yakaumbwa Mac: zvinyorwa, mapikicha, mavhidhiyo ... Kana iwe usingade chero cheichi nekuti zvese zvakagamuchirwa Gore, unogona kutsika danho iri.
Vhura iyo Mac App Store uye dhawunorodha yazvino vhezheni yeiyo macOS simaki zvakare.
Zvichakadaro, enda ku dandemutande iri uye tora chishandiso cheDisk Mugadziri
Kamwe macOS uye DiskMaker zvadzingwa, ita shuwa kuti unayo kadhi reS SD kana pendrive inokwana 8GB kugona uye kuibatanidza kune yako Mac.
Kutanga iyo DiskMaker application uye uteedzere mirairo yayo. Iwe unongofanirwa kusarudza iyo inoshanda sisitimu uye iyo pendrive iwe yawakabatanidza uye nekuisa yako Administrator password. Maitiro anobva atanga izvo zvinogadzira iyo boot disk on akadaro pendrive. Iva nemoyo murefu, maitiro acho anotora chinguva saka usaite chero chinhu kusvika meseji yaonekwa pachiratidziro inoratidza kuti zvese zvagadzirira.
Kana maitiro apera, vhura "Sarudzo dzeSystem" ku "Startup Disk". Sarudza iyo itsva boot disk (iyo pendrive yawakagadzira) uye tinya pakatangazve. Kana ukakurudzirwa, simbisa chiito uye mirira kuti Mac yako iite boot neiyo macOS simaki pachiratidziri.
Zvino sarudza "Disk Utility", sarudza iyo iripo partition pane yako Mac uye rova ​​Delete bhatani kuve nechokwadi chekuichengeta mu "Mac OS Plus (Journaled)" fomati. Izvi zvinodzima rese razvino rinoshanda system, zvichisiya Mac yako yakachena kune iyo nyowani yekumisikidza.
Regedza "Disk Utility" uye enderera ne macOS yekumisikidza maitiro senguva dzose.
Kana uchikurudzirwa, pinda yako Apple ID, uye yako "nyowani" Mac inozozvishandura pachako mabhukumaka, nhoroondo, mabhukumaki, Apple Music zvemukati, mifananidzo uye mavhidhiyo kubva kuApp photos, zvinyorwa uye mafaera akachengetwa muICloud Drive, nezvimwe.
NOTA: Kana iwe wakazvimisikidza kuti utengese, usapinze yako Apple ID, panguva ino unogona kuidzima kuitira kuti muridzi wayo mutsva aigadzirise.
Uye Voilà! Wakatomomisa Mac yako uye ikozvino iwe unogona ikozvino kunakirwa yazvino vhezheni yeanoshanda system pane yakashenesa kuiswa. Iwe unobva waona ipapo kuti yako Mac inoshanda nekukurumidza uye yakajeka, uye kuti ine yakawanda yemahara yekuchengetedza nzvimbo.
Iye zvino unofanira kungovhura Mac App Store, enda kune "Yakatengwa" chikamu, uye tanga kudhawunirodha nekuisa ese maapplication aunoshandisa kazhinji. Imwe bhenefiti yakakura ndeyekuti maapplication aya anozoiswa mune yavo yazvino vhezheni, uye kwete kugadzirisa pane kugadzirisa.
Chekupedzisira, kana iwe uchinetseka kuti kangani kaunofanidza Mac, ini ndinongokuudza kuti ndinozviita kamwe pagore, zvinowirirana nekusunungurwa kweshanduro nyowani, uye saka timu yangu inogara ichifamba mushe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekuomesa dhiraidhi yakaoma paMac
Mhoro, ndatenda nerubatsiro rwako. Ndakaita izvo iwe zvawakakurudzira uye kana ini ndikawedzera zvishoma kugona kwenzvimbo yemahara mune yekuchengetera, asi izvozvi saizi yemifananidzo, odhiyo nemamuvhi hazvicharatidzike muhwindo iro, sezvazvaimboita Ndokumbirawo ndinoita sei yekuchengetera kuratidza kuti iyo yekuchengetedza ndapota.
Pindura kuna nickyhelmut
Zvakanaka, zvinoita sekunge zvaive zvakakwana kuburitsa marara kuti uone iwo anoonekwa maitiro evhidhiyo, odhiyo, mifananidzo uye backup. Kusahadzika kwangu ndekwekuti chikamu chakasiyana zvakasiyana zvine chekuita nezvazvaive nazvo usati waita maitiro awakakurudzira (iro rimwe boka rakakura kana richienzaniswa nedzimwe nzira, asi ndinofunga zvakajairika). Kunyange zvakadaro, dai iwe uine chero mazano ekuvandudza mashandiro eangu «MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014)» Ini ndaizozvitenda nekuti ini ndinonzwa kuti yakadzikiswa uye dzimwe nguva zvinotora nguva kudzima uye dzimwe nguva yakaturikwa kwenguva diki asi inodaro.
Mhoro. Ndine multimedia hard drive, uye ini ndoda kuimisa ne ntfs. ine mac kaputeni kana xs system
iwe unofanirwa kuibatanidza iyo kuMac uye kubva kuDisk Utility sarudzo tevera matanho ari muchinyorwa pane iyo diski yekutsvaga OS X Plus (ine registry)
Yangu Pro Yakavandudzwa asi yave kunonoka here kubva pa4 kusvika 8 Ram kana zvinokurudzirwa kuinyorera? Ndatenda
Pindura kuna Wilson
Sony 4K inoverenga discs pane exfat
Pindura kuna alvaroque2014
Davis wacho akadaro
Mhoro zvakanaka, ndingaite sei fomati mac ine 2 yemukati hdd, imwe yakasimba uye imwe "yakajairika"?
haina trim inoenderana, nenzira, uye iri samsung ssd 840 pro dzakateedzana.
"Haina kuenderana kwetatu, nenzira, uye iri samsung ssd 840 pro dzakateedzana."
tsime ndizvo zvazvinotaura mu "nezve mac"
Ini ndinoshandura yangu yekutanga hard drive nekuti yaive yakaipa. Ndakatora mamiriro aya ndichiyedza kuisa kaputeni uye pakarepo muchina wakakiiwa. MuApple ndakaenda kune dambudziko, asi ivo vakati yakaipa hard drive. Handina boot disk.
Ini ndinoshandura nyowani 1 TB SSHD hard drive, uye ini ndaisa nyowani 16 GB RAM pamberi pe4 GB. Ndakadzokera kuApple zvakare uye vakatadza kuisa kaputeni. Ndakaedza pane mumwe muchina uye RAM kana yaishanda. Nyanzvi yakaita test hard drive uye yakashandawo. Microprocessor yakashanda zvakare.
Pano data kubva pakombuta yangu, vamwe vanogona kunge vaine dambudziko rakafanana
Macbook pro paavhareji 2010, yakanga yaiswa Snow Leopard Yakaremara hard drive yaive 500GB uye 4GB Ram. Ini ndinoshandura ku1TB hard drive uye 16GB RAM.
kwaziso, ndatenda neruoko pamberi
Gabriel Martinez akadaro
shamwari ini ndine macbook pro yatete vangu ine pasword efi yeiyo bios uye haina iyo mushandisi account yeanoshanda system ini ndoda kuimisa sezvandinogona kuzviita
Pindura kuna gabriel martinez
Mhoro Shamwari yekuMac!
Ini ndine itsva yekunze Hard Dhiraivha, uye ini ndoda kuimisa kuti ndiishandise pane yangu iMac. Iyi ndiyo My Passport modhi WD. Zvinoitika kuti ini ndinoita nhanho dzekuita fomati, asi kana ndasvika kune yekupedzisira hwindo uye tinya pakadzima,
meseji inondiudza: "Kubvisa vhoriyamu kwakundikana nekuda kwekukanganisa: Dhisiki harigone kudzikiswa"
Dzimwe nguva: »Dhisiki haigone kuvhurwa» uye girafu rekumira rinonyangarika, uye Dhisiki rinoramba risingazivikanwe.
Iwe unogona here kundiudza kuti dambudziko nderei ??? Thanks uye nezve. Carlos.
Mhoro. Ini ndakaisa nyowani yakakosha SSD drive mukati medu 2010 MBP iyo yakagadziridzwa neSierra. Ini ndinoedza kugadzirisa dhisiki uye haizondirega ndichidzima. Mepu yekuparadzanisa yakanyorwa seisingapindirani.
Kana ini ndikaedza kudzoreredza kubva panguva muchina inoramba ichitsvaga kwekuenda diski. Ini ndinofunga imhaka yekuti haina fomati.
Ndingaite sei kuti ndiwane fomati shanduko uye kuenderana?
Pindura ku sortizrosa
mhoro .. ndiri kufunga kutenga WD multimedia hard drive. asi mutengesi anondiudza kuti inongotsigira MAC, MAC OS PLUS fomati.
mubvunzo wangu ndewekuti iwe unogona here kuita chimwe chinhu ... fomati iyo kana chimwe chinhu kuti chishande nemahwindo?
Canon digital, Aetna inopa Apple Watch, 1.000 bhiriyoni yeTV nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Iko kushanduka kweMacOS muvhidhiyo isingasviki maminetsi maviri